निषेधाज्ञामा ओलीको कल्याण कसरी?
आयोमेल संवाददाता बुधबार, भदौ ३, २०७७
काठमाडौं उपत्यकामा साताव्यापी निषेधाज्ञा गरिँदा दुइटा अहम् सरोकार तेर्सिएका छन्ः अब सरकार साँच्चै महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर भएको हो? जनता महामारीसँगै जीवन बिताउन तयार भइरहँदा राज्यबाट के मद्दत पाउँछन्?
‘बेसार खाएर हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर कोरोना-सोरोना उडाइदिउँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली अब संयन्त्रलाई उत्कृष्टतामा परिचालन गरी आराम गर्नपट्टि लागेका हुन् भने पनि राम्रै मान्नुपर्छ। पार्टीभित्रको रँडाकोले मजाक शैलीको उपसंहार पाउने अवस्थामा ओलीलाई ढुक्क काम गर्ने वातावरण मिलेकै छ।
नेपाली जनताले सुको राहत नपाएको अवस्थामा पनि कर तिरेर राज्य खर्च धानिरहेका बेला उनी उत्तरदायी र कृतज्ञ बन्नसक्नुपर्ने हो। सेना नै गालीमा उत्रेको यो बेला उनी फेरि ओम्नी र भारदारको पृष्ठपोषणमा नलागे कल्याण हुने थियो।